Siciid Jaamac Xuseen: Magac iyo Meeqaan. W. Q. Rashiid Sheekh Cabdillaahi ‘Gadhwayne’ | Dr. Jama Musse Jama
Siciid Jaamac Xuseen: Magac iyo Meeqaan. W.…
Siciid Jaamac Xuseen: Magac iyo Meeqaan. W. Q. Rashiid Sheekh Cabdillaahi ‘Gadhwayne’
Horraantii afartannaadii qarnigii labaatanaad buu ku dhashay Miyiga degmada Ceerigaabo, Gobolka Sanaag. Carruurnimo ayuu awowgii aabbo oo reercadmeed ahaa u qaaday Cadan. Halkaas bay asaga iyo laba ka da’ yaraa (Xaaamud iyo Saalax Jaamac) ku koreen oo ku barbaareen xannaanada awoowo iyo ayeeyo.
Waxa uu markan salka dhigtay magaaladii Cadmeed oo gurigiisa labaad ahayd, qoyskiisu na uu degganaa. Waxa uu isha ku hayey geedisocodka burburka siyaasadeed iyo bulsheed ee Taliska Siyaad Barre dalka u horkacayo. Kolkii taas lama-huraankeedu yimid na, waxa uu ka mid noqday qurbojoogga Soomaaliyeed ee tirada badan; waxaa na uu salka dhigtay magaalada London iyo UK. Hayeeshee xidhiidhka uu dalkii iyo dadkiisii la leeyahay wuu sii luxdamay. Dhaqdhaqaaqa fikirka, dhaqanka iyo aqoonta ayuu si weyn uga dhex muuqday. Qoraalladiisa buugta ku daabacmay iyo hawlaha macallimo ee uu ka hirgelyiyey Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa iyo Bandhigga Buugaagta sannadlaha ah iyo Toddobaadka Soomaalida ee lagu qabto Magaalada London (London Somali Week Festival) ayaa ka marag ah mugga weyn ee kaalintiisa. Waxa uu ka mid noqday Guddiga Maaraynta Ururka Kayd ee hoggaamiya hawlaha Toddobaadka Soomaalida. Midhaha qalinkiisa waqtigan na waxaa ka mid ah buugta Safar Aan Jaho Lahayn, Shufbeel iyo Ma Innaguun baa. Waxaa dheer qoraallo curisyo ah oo ku soo baxay baraha bulshada, degellada Intenetka iyo wargeysyada Soomaalida.
Waxa aan ka faa’iidaystay kulankii Ururka Kayd oo loo ballamay 27kii, bisha Feb. 2020ka (Waa kulan uu Siciid Jaamac ka soo qaybgeli kari waayey). Maalin ka hor baan u tegay oo aan u soo qasday in aan ishiisa ka bogto. Qolkiisa hurdada gudahiisa, sariirta uu saaran yahay dhinaceeda ayaan kursi ku soo fadhiistay; halkaas baanu isku waraysannay oo intii aannu isla mari jirnay ba, isla marnay.
Rashiid Sheekh Cabdillaahi(Gadhweyne)
Tagged: Siciid Jaamac Xuseen
Tweet Abstract: This paper formulates some changes in Somali poetry composi
Tweet Somaliland Special Envoy, Dr Edna Adan Ismail, appeals to the world l
Tweet Madaxmeyne Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal ayaa soo hordhigay golaha ba
Tweet Qoraalkani waxa uu soo baxay 2016kii. Halkan hoose ka eeg sheekada oo
Maangal: hordhac iyo qeexo aasaasi ah
Tweet Sida af kasta oo adduunka lagaga hadlaaba uu u leeyahay unugyo sal u